Semalt: ट्र्याकिंगका फाइदाहरू तपाईंको सामग्रीमा प्रयोगकर्ताहरूको प्रतिक्रिया
सोसल मिडिया विचार अनलाइन फैलाउन को लागी एक महत्वपूर्ण उपकरण भएको छ। प्रत्येक दिन प्रत्येक व्यक्तिद्वारा बनाइएको अनुमानित ,000०,००० विचारहरू एसईओको न्यूनतम अनुप्रयोगको साथ पनि अनलाइन जानकारी निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति हो, तर मात्र यदि सामग्री अर्थपूर्ण छ। राम्रो विचार अनलाइन ट्राफिक बढ्छ। वेब आगन्तुकहरूले जानकारी लिने र यसलाई विभिन्न अनलाइन प्लेटफर्महरू मार्फत साझेदारी गर्छन्।
जेसन एडलर, Semalt डिजिटल सेवाहरूको ग्राहक सफलता प्रबन्धक भन्छन कि एक आकर्षक सामग्री बनाउने प्रक्रिया जसले श्रोतालाई वास्तविक अपील गर्दछ दर्शकले टिप्पणी योगदानको सराहना गरिरहेको छ। वेब सामग्री साझेदारी गर्न श्रोताहरूले प्रयोग गरेका केहि तरिकाहरूमा निम्न प्रतिक्रियाहरू समावेश छन्:
स्पामिंग: यस्तो सामग्री जुन व्यावहारिक छैन र दर्शकहरूको मागमा योगदान पुर्‍याउँदैन यसैले बेकम्मा र यसकारण स्पाम भनिने उच्च सम्भावनाको सामना गर्दछ। सामग्रीको स्प्यामिंगले वेब प्रयोगकर्तासँग भविष्यको अन्तर्क्रियाबाट यसलाई हटाउँदछ।
स्किपि:: एक सामग्री लेखक जुन वेब पृष्ठमा दुवै प्रासंगिक र अप्रासंगिक सामग्री मिक्स गर्दछ पाठकलाई गाह्रो समय दिन्छ। प्रयोगकर्ताले अप्रासंगिक सामग्री छोडिदिन्छ कि उसलाई वा उनलाई के उपयोगी छ भनेर खोज्नको लागि। यदि सामग्री लगातार कमजोर छ भने, लेखक अन्ततः बन्द लेखिन्छ।
स्क्यानि:: जब पाठकले वेब सामग्रीको सान्दर्भिकतामाथि शंका गर्छन् उनीहरू हतारिंदै पढ्दछन् बाँकी सामग्री छोड्ने बेलामा प्रासंगिक केहि पनि छनौट गर्न।
रोक्दै: यदि लेखले पाठकहरूलाई छोयो भने, उनीहरूले पढेको वस्तुको बारेमा सोच्न रोक्न सक्छन् र उनीहरूको व्यक्तिगत वा व्यावसायिक मुद्दाहरूमा फोकस गर्दछ।
बचत गर्दै: राम्रो सामग्री सन्दर्भ गर्न वा भविष्य भ्रमण गर्नु द्रुत पुनः प्राप्तिको लागि बचत योग्य छ।
शिफ्टिंग: एक छुने सामग्रीले पाठकको मान र चरित्रलाई असर गर्छ। तिनीहरूको मनोवृत्ति र दृष्टिकोण सामान्य जीवनमा परिवर्तन हुन्छ।
पठाउँदै: पाठकहरूले सामग्री साझेदारी गर्न सक्दछन् यदि उनीहरूलाई लाग्छ कि यो उनीहरूको लागि मात्र उपयोगी छैन तर अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि।
प्रसार: एक सुविधाजनक सामग्री ब्लगहरू र सोशल मीडियाको माध्यमबाट फैलिन्छ। सामग्री व्यक्तिगत मिडिया प्लेटफर्महरू मार्फत धेरै व्यक्तिहरूमा पुग्छ।
सदस्यता: जब पाठकहरू सामग्रीसँग सन्तुष्ट हुन्छन्, विश्वास व्यक्त गर्ने तिनीहरूको अन्तिम रूप भविष्यमा अधिक सामग्रीको लागि साइटमा सदस्यता लिनु हो।
त्यहाँ अनलाइन सामग्री पोष्ट गर्नु अघि केहि विचारहरू छन् यदि यसले राम्रो प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नुपर्दछ।
१. श्रोतालाई चिन्नुहोस्
दर्शकहरूको ज्ञान सामग्रीको सकारात्मक पाठकहरू छन् भन्ने सुनिश्चित गर्न मौलिक हुन्छ। यस लेखले श्रोताको ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ लेखकमा होइन। दर्शक को हो भनेर जान्नुहोस्, उनीहरूको चासो र यस समयमा उनीहरूको चासो।
२. उद्देश्यहरू बुझ्नुहोस्
सामग्रीको उद्देश्यका बारे सोच्नुहोस् र लेखको पाठकको आकलन गर्नुहोस् यदि SEO लागू हुनेछ।
A. रचनात्मकता प्रयोग गर्नुहोस्
सामग्री र दर्शकहरूको बारेमा आधारभूत जानकारी प्राप्त गरिसके पछि, रचनात्मकतामा ध्यान केन्द्रित गर्दै सेट लक्षहरू पूरा गर्न अपील सामग्री सिर्जना गर्दछ। रचनात्मकताले सामग्री र विचारहरूमा विशिष्टता समावेश गर्दछ जुन दर्शकहरूको मागहरू पूरा गर्दछ। लेख प्रासंगिक र उपयुक्त लम्बाइको हुनुपर्दछ र एसईओ संयन्त्र प्रयोग गरेर अपलोड गर्नुपर्दछ।
Feed. प्रतिक्रियालाई कदर गर्नुहोस्
सामग्री अनलाइन पोष्ट गरेपछि, एक मूल्या audience्कन गर्न श्रोताहरूबाट प्रतिक्रिया ट्र्याक गर्नुहोस्। सुधारको लागि आलोचकहरूलाई अँगाल्ने क्रममा भविष्यका लेखनमा बहुमूल्य प्रतिक्रिया समावेश गर्नुहोस्। दर्शकहरूले माथिका हाईलाइट मार्गहरूमा आफ्ना प्रतिक्रियाहरू व्यक्त गर्छन्।
रचनात्मक हुनुहोस्, दर्शकहरूलाई ट्र्याक गर्नुहोस् र वेबमा उपस्थिति बढाउनको लागि SEO संयन्त्रहरू लागू गर्नुहोस्।